लागुऔषध तस्करीको ट्रान्जिट बन्दै झापा – Sulsule
सुलसुले २०७८ मंसीर ९ गते १५:५० मा प्रकाशित
लागुऔषधको दुरुपयोगको समस्या दिनानुदिन बढिरहेकाले झापा प्रहरी आक्रमक शैलीमा लागुऔषध कारोबारी पक्राउ गर्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ । लागुऔषध ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्वव्यापी समस्याका रुपमा रहेको लागुऔषध प्रयोग र कारोबार झापामा पनि जटिल बन्दै गएको प्रहरी अधिकारीको दाबी छ । लागुऔषध प्रयोग गरेका कारण पनि जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाहिरी देशमा सङ्गठित र सक्रिय गिरोहको सञ्जालले गर्दा पनि नियन्त्रण कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । पूर्वी काँकडभिट्टा र दक्षिणी गौरीगञ्ज भारतीय नाकाबाट बढीजसो लागुऔषध जिल्लामा भित्रिने गरेको छ । त्यो नाकाहुँदै कारोवारीले जिल्लाको सहरी क्षेत्र धुलाबारी, चारआली, बिर्तामोड, भद्रपुर, दमकलगायतका क्षेत्रमा पु-याउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराईका अनुसार खुला सीमाका कारण नेपाल र भारतको स्थलमार्ग हुँदै ठूलो परिणाममा लागुऔषध ओसारपसार हुने गरेको छ । भारतबाट ब्राउन सुगर, हेरोइन, कोकिनलगायत लागुऔषध नेपाल आउने गरेको पाइएको छ । नेपालबाट गाँजा, चरेस र अफिम ठूलो परिणाममा भारततर्फ तस्करी हुनेगर्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ देखि २०७८ मङ्सिरसम्म ७९० लागुऔषध कारोबारी पक्राउ परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले १८२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लागुऔषध सम्बन्धीका ११८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा लागुऔषध प्रयोग तथा ओसारपसारमा संलग्न हुनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा अधिकांश १४ देखि ४० वर्ष उमेरसम्मका छन् । उनीहरूले शरीरका विभिन्न भागमा लागुऔषध लुकाएर ल्याएका थिए । पक्राउ पर्नेहरूमध्ये अधिकांशले आफू भरिया भएको बताउँछन् । लागुऔषध सीमा कटाएबापत रु. एक हजारदेखि १० हजारसम्म ज्याला पाउने उनीहरू बताउँछन् ।
जहिल्यै भीडभाड हुने मुख्य नाका र त्यसवरपर नेपाल प्रहरीको निगरानी कम पुग्दा लागुऔषध तस्करले खेतबाट रात साँझको समयमा समेत लागुऔषध नेपाल भित्रियाउने उनले बताए । काँकडभिट्टा र गौरीगञ्जमा रु. डेढ सयदेखि दुई सय पर्ने लागुऔषध काठमाडौं, चितवन र पोखरा पु¥याउँदा रु. एक हजारदेखि तीन हजारसम्म प्रतिडोज मूल्य पर्ने भएकाले तस्करहरू यस नाकातर्फ पल्किएको ती युवाको भनाइ छ ।
विदेशी नागरिकले लागुऔषध नेपालको सीमानासम्म ल्याइदिने र त्यहाँबाट भने नेपालीले लागुऔषध स्थानीयस्तरमा पु¥याउने गरेको पाइएको छ । जसकाकारण मुख्य कारोबारी पक्राउ गर्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसो त नेपालमा प्रतिबन्धित लागुऔषध भारतीय बजारमा सहजै खरिद गर्न पाउने भएकाले पनि नेपाली प्रयोगकर्ताका लागि भारतीय बजार रोजाइँमा पर्ने गरेका प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले राससलाई बताए ।